तालिबानविरुद्ध किन असफल भयो अफगानी सेना ? « Deshko News
तालिबानविरुद्ध किन असफल भयो अफगानी सेना ?
अफगानी सेनाको संख्या घट्न थालेपछि स्थानीय मिलिसियाहरुलाई उपयोग गर्न थालियो । ती मिलिसियाहरु रसिद दोस्तम, इस्माइल खानलगायतका आदिवासी नेताहरुसँग नजिक थिए । हुन त पश्चिमा मुलुकहरु पहिलाबाटै यस्ता मिलिसियाहरुसँग ढुक्क थिएनन् । तर अफगानिस्तानमा केन्द्रीय सरकार र मुलुकमा उसको पकड मजबुद बनाउन आदिवासी नेता तथा तीनका मिलिसियाहरुको सहयोग चाहिन्थ्यो नै । तर यी आदिवासी नेता तथा मिलिसियाहरु पनि अनियमितता र अफगानी नागरिकलाई दुर्व्यवहार गर्ने मामलामा चोखो देखिएनन् ।
आइतबार आएका खबर अनुसार, दोस्तम उज्वेकिस्तानतर्फ लागेका छन् भने खानले तालिबानसमक्ष आत्मसमपर्ण गरेका छन् । कतिपयले सोध्‍न सक्छन्, अफगानिस्तान जस्तो मुलुकमा पश्चिमा शैलीको सैन्य शत्ति निर्माण गर्न सम्भव छ ? जबकि अफगानिस्तान विश्वकै गरिब मुलुकमध्येको एक हो । जहाँ ४० प्रतिशत नागरिक मात्र साक्षर छन् । अनि राष्ट्रवादको बलियो जग पनि छैन । त्यो पनि विदेशी हस्तक्षेपका कारण कमजोर बनेको छ ।
अमेरिकी सेनाका प्रशिक्षकहरुले के पनि भनेका छन् भने, अफगानी सेनाका जवानहरुलाई तालिम दिन कहिले पनि सहज महसुस भएन । आधारभुत ज्ञान बाढ्नै पनि असाध्यै गाह्रो हुन्थ्यो । ‘अधिकांश अफगानी सैनिक मुलुकका लागि युद्ध लड्न भन्दा पनि तलबका लागि भर्ति भएका हुन् । अफगानिस्तानमा रोजगारीको अभाव छ । यस्तोमा कमाइका लागि सेनामा भर्ती हुनु भरपर्दो विकल्प हो,’ अफगानिस्तानमा खटिएको अमेरिकी नेतृत्वको विदेशी सैन्य फौजका लागि सल्लाहाकारको भूमिकामा रहेका जोनाथन स्क्रोडेनले भनेका छन् ।
अफगानी सेनाले पटक पटक सैन्य सामाग्री तथा बन्दोबस्तीका सामानको आपूर्ती कमजोर बनेको गुनासो गरिरह्यो । जनशक्ति बढाउनुपर्ने माग पनि सुनिएन । सेनाभित्रकै एलिट युनिट पनि युद्धमा थाकिसकेको अवस्था थियो । गत महिना मात्रै यस युनिटका एक दर्जन कमाण्डोहरुको तालिबानले हत्या गरेका थिए । तालिबानविरुद्धको भिडन्तमा गोली सकिएपछि ती कमाण्डोहरुले आत्मसमर्पण गर्नु परेको थियो ।
पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ रिचार्ड आर्मिटेज काबुलको अवस्थालाई उबेलाको भियतनामसँग तुलना गर्छन् । जर्ज डब्लु बुस प्रशासनमा सहायक विदेश मन्त्री रहेका आर्मिटेज अफगानी सेनाको असफलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असफलता मान्छन् । ‘धेरैले भनिरहेका छन्, अफगानी सेनाले युद्ध लड्न सकेन । तर म के भन्छु भने, अफगानी सेनाले युद्ध लडेकै हो, अझैँ पनि लड्न सक्छ । अन्तिम गोली रहेसम्म लड्न तयार छ । बरु प्रश्न के चाहिँ हुनसक्छ भने, अहिलेको अफगानी सरकारका लागि लडेर केही फाइदा छ ?,’ आर्मिटेज प्रश्न गर्छन् । (रोयटर्सको सहयोगमा)